WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: မြန်မာနိင်ငံ ကို အဖက်ဖက်က ကာကွယ်ကြပါ။
All people of Burma must remember to protect Burma from all fronts.
မြန်မာ့ ဝေဟင်ကို ကာကွယ်နေသည့် တပ်မတော်(လေ) အပိုင်း(၁)
မြန်မာ့ ဝေဟင်ကို ကာကွယ်နေသည့် တပ်မတော်(လေ) အပိုင်း(၂)
The following is notes from above article to highlight.
ဘုရင့်နောင် စစ်ဆင်ရေး အပြီး တစ်နှစ်အကြာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် တပ်မတော်သည် ရန်ကြီးအောင် စစ်ဆင်ရေးကို ဆင်နွှဲ ရပြန်သည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေး ကြီးတွင် တရုတ်ဖြူ အင်အား ၆၀၀၀ ကျော် ရှိနေသော စခန်း လေးခုကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ ဘုရင့်နောင် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ကစဉ့်ကလျား ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး သွားကြသော တရုတ်ဖြူ တပ်များသည် မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် အင်အား ပြန်လည် စုဖွဲ့ နေကြသည်။ ဗမာ့ တပ်မတော်သည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပရန် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး အတွက် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ် ၃၁ စင်းကို အစ္စရေး နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူ၍ အင်အား ဖြည့်တင်း ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အမှတ်(၁) အုပ်မှ လေသူရဲ များသည် စပစ်ဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ် များကို ဆီးဖိုင်းယား တိုက်လေယာဉ် များနှင့် တွဲဖက်၍ တရုတ်ဖြူ စခန်းများကို လေကြောင်းမှ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။
အမှတ် (၂)အုပ်မှ လေသူရဲ များကလည်း ဒါကိ်ုတာ လေယာဉ်ဖြင့် ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာရှိ မြေပြင် တပ်ဖွဲ့များကို ရိက္ခာပစ္စည်း များနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက် များကို လေကြောင်းမှ ချပေးခဲ့သည်။ ရန်သူများသည် လေကြောင်း ရိက္ခာနှင့် ခဲယမ်း မီးကျောက်များ ချပေးသည့် ဒါကိုတာ လေယာဉ်များကို မြေပြင်မှ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆီးကြို ပစ်ခတ်ကြသည်။ ဤသို့ ပစ်ခတ်သည့် ကြားမှ လေသူရဲ များကလည်း ရဲဝံ့ စွန့်စားစွာ ဝင်ရောက် ချပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်တွင် လေသူရဲ ဗိုလ်ထွန်းမြင့် မောင်းနှင်သည့် ဒါကိုတာ လေယာဉ် တစ်စင်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ဗမာ့ကြည်း တပ်မတော်၏ စခန်း တစ်ခုသို့ လေကြောင်းမှ ရိက္ခာ ချပေးစဉ် ရန်သူ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လေယာဉ်ပျက်ကျ ခဲ့ရသည်။ လေသူရဲနှင့် လေယာဉ်သား အားလုံး အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုသည် တရုတ်ဖြူ စစ်ဆင်ရေးတွင် ဗမာ့ တပ်မတော်၏ ဒုတိယ အကြိမ် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ ဝေဟင်ကို ကာကွယ်နေသည့် တပ်မတော်(လေ) အပိုင်း(၃)
Please take note ဒုဗိုလ်ပီတာ (2nd Lt Peter ) wasaKaren.
မန်မာ့ ဝေဟင်ကို ကာကွယ်နေသည့် တပ်မတော်(လေ) အပိုင်း(၃)
Written by မိုးဦး
အမျိုးအမည် မသိ လေယာဉ် တစ်စင်းသည် တာချီလိတ်မြို့ အနောက်ဘက်ရှိ တရုတ်ဖြူ စခန်းများသို့ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ရိက္ခာများ ချပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိ၍ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် တပ်မတော် (လေ) ကင်းထောက် လေယာဉ် စက်စနာဖြင့် ဝေဟင်မှ ကင်းထောက်ခဲ့ရာ
ရန်သူ့ စခန်းများက ၎င်းတို့ လေယာဉ်ဟု ထင်မှတ်ကာ အမှတ်မသား ခင်ကျင်းခြင်း၊ မီးဖိုခြင်းများ ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိ ရသဖြင့် ၎င်းတို့ အချိန်းအချက် လုပ်ထားချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရရှိသည့် အတွက် တပ်မတော် (လေ)မှ ဆီးဖြူရီ လေယာဉ် သုံးစင်းဖြင့် စောင့်ကြပ် နေစဉ်မှာပင် အမှတ်အသား မပါသော စက်လေးလုံးတပ် လေယာဉ်ကြီး တစ်စင်း မြန်မာ့ ဝေဟင် ပိုင်နက်သို့ ဝင်ရောက် လာသဖြင့် အသင့် စောင့်ကြပ်နေသော ဆီးဖြူရီ တိုက်လေယာဉ် သုံးစင်းနှင့် ဝေဟင်တွင် ထွေးလုံးရစ်ပတ် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် လေသူရဲ ဗိုလ်မောင်သိန်း၊ ဗိုလ်ချစ်ခိုင်နှင့် ဒုတိယဗိုလ် ပီတာတို့သည် စက်အမြောက် ၁၂ လက် တပ်ဆင် ထားသော လေယာဉ်ကြီးကို အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ပြီး ပစ်ချ နိုင်ခဲ့သည်။ ရန်သူ့ စက်လေးလုံးတပ် လေယာဉ်လည်း မီးလောင် ပျက်ကျသကဲ့သို့ ဒုတိယဗိုလ် ပီတာ မောင်းနှင်သည့် ဆီးဖိုင်းယား လေယာဉ် တစ်စင်းလည်း ပျက်ကျကာ ဗိုလ်ပီတာ ကျဆုံး ခဲ့လေသည်။ ပျက်ကျသွားသော ရန်သူ့ လေယာဉ်ကြီးမှာ B-24 စက်လေးလုံးတပ် လေယာဉ် အမျိုးအစား ဒဿမ ၅ စက်သေနတ် ၁၀ လက် တပ်ဆင်ထားသည့် ပစ်အားကောင်းသော PB4Y-2 Privateer လေယာဉ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က သတင်းများတွင် တပ်မတော် (လေ)မှ ဆီးဖြူရီ လေယာဉ်များနှင့် ရန်သူ့ လေယာဉ်ကြီး တို့၏ လေကြောင်းတိုက်ပွဲ သတင်း၊ ဒုတိယဗိုလ် ပီတာ ကျဆုံးခြင်းနှင့် ဈာပန အခမ်းအနား များကို တခမ်းတနား ဖော်ပြဂုဏ်ပြု ခဲ့ကြသည်။ ယင်းလေကြာင်း တိုက်ပွဲ အောင်မြင်မှုကြောင့် ကူမင်တန် တပ်များ၏ ကျူးကျော်မှုသည် ကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် အတိအလင်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး မဲခခေါင် စစ်ဆင်ရေး အပြီးတွင် ကူမင်တန် တပ်များ မြန်မာ့ မြေပြင်ပေါ်မှ ဆုတ်ခွာသွား ခဲ့ကြသည်။ ထိုလေကြောင်း တိုက်ပွဲမှာ တပ်မတော်(လေ) သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့သလို ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသတွင် ပထမဆုံး ဖြစ်ပွားသည့် လေကြောင်းတိုက်ပွဲ အဖြစ်လည်း သမိုင်း ဝင်ခဲ့သည်။ ထိုသမိုင်းဝင် လေကြောင်း တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော် (လေ)မှ လေသူရဲ ဗိုလ်ပီတာသည် အမိမြေ အတွက် အသက်စွန့် တိုက်ပွဲဝင် သွားခဲ့သည်။
တပ်မတော် (လေ)သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကာလများ အတွင်း ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ သံလွင် အရှေ့ခြမ်း စိုးမိုးရေး ဟူသည့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ဗျူဟာကို ချေမှုန်း နိုင်ခဲ့သည့် ၁၉၆၉ ခုနှစ် ကုန်ကြမ်းတိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ကွမ်လုံ ရက် ၄၀ တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ် ထော်ပိုင် စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် တိုင်းလုံးအောင် စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အောင်သံလွင် စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လတွင် (ပဲခူးရိုးမ) အောင်စိုးမိုး စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မြဝတီ သင်္ကန်း ညီနောင် ဒေသ တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရဲနိုင်အောင် စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် မိုးမိတ်မြို့ တိုက်ပွဲ၊ ခြူးရွှေ-ပန်ကောက် တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပွိုင့် ၆၀၄၁ တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဝမ်နောင်လေး၊ လွယ်ယုတ်တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၇၉/ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် မိုင်းယောင်းမြို့ တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် မုန်စီး၊ နားလည်တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် စီစီဝမ် တာပန် တိုက်ပွဲ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မိုင်းယမ်း၊ မဲသဝေါတိုက်ပွဲ၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ပွိုင့် ၄၀၄၄ ခွေးအိပ်တောင် တိုက်ပွဲတို့တွင် လေကြောင်းမှ ပါဝင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ထိုတိုက်ပွဲများ တစ်လျှောက် တပ်မတော် (လေ)၏ စွမ်းဆောင် နိုင်မှုများကြောင့် သီဟ သူရဘွဲ့ တစ်ဦး၊ သူရဘွဲ့ ၂၂ ဦး၊ သီဟဗလဘွဲ့ တစ်ဦး၊ သူရဲကောင်း မှတ်တမ်းဝင် ၉၆ ဦးနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ သူရဲကောင်း လက်မှတ်ရရှိသူ ၇၇ ဦးတို့ စွမ်းရည် ဘွဲ့များ ရရှိခဲ့သည်။
တပ်မတော် (လေ)သည် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နှင်းရေး စစ်ဆင်ရေးတွင်လည်း ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ပန်ပိ စစ်ဆင်ရေးတွင် ကူမင်တန် တပ်များ၏ ဘိန်းချက် စခန်းများကို တပ်မတော် (ကြည်း)နှင့် အတူ ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော မိုးဟိန်း စစ်ဆင်ရေးများတွင် အဆင့်(၁)မှ အဆင့်(၁၂) အထိ တပ်မတော် (ကြည်း)နှင့်အတူ တပ်မတော် (လေ)မှ လေယာဉ်/ ရဟတ်ယာဉ်များ ပါဝင် ဆင်နွှဲပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သော လေယာဉ်/ ရဟတ်ယာဉ်များ အပြင် အခြား တိုက်လေယာဉ်များ၊ ဗုံးကြဲ လေယာဉ် များဖြင့်လည်း အသုံးပြု တိုက်ခိုက် ခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇင်နူး စစ်ဆင်ရေးတွင် ချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဘိန်းခင်းများကို ကင်းထောက် ရှာပေး ဖွေခဲ့သည်။ မိုးဟိန်း စစ်ဆင်ရေး တွင်လည်း အဓိက အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ တောင်ရန်ရှင်း စစ်ဆင်ရေးတွင် ဘိန်းစိုက်ခင်း များကို လေယာဉ်မှ ဆေးဖျန်းနေစဉ် ရုတ်တရက် အင်ဂျင်စက် စွမ်းအား ကျဆင်းသဖြင့် လေယာဉ် ပျက်ကျကာ လေသူရဲ ဗိုလ်မှူး စံထွား ကျဆုံး ခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မေလတွင် လွယ်မော် ဘိန်းသောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အား တပ်မတော် (ကြည်း)နှင့် လက်တွဲ၍ တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ လက်ထက်တွင်လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေး အေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာ- အမေရိကန် ဘိန်းအထွက်နှုန်း တိုင်းတာရေး (Opium Yield Survey) လုပ်ငန်း များတွင်လည်း တပ်မတော် (လေ)မှ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော် (လေ)သည် စစ်ဆင်ရေး တာဝန်များ သာမက နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၊ လူသားချင်း စေတနာ ထောက်ထားမှု၊ အကူအညီ ပေးရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး စသည့် လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်စေတနာ အပြည့် အဝဖြင့် ထိရောက်စွာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အင်အား ပြင်းထန်သော နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဂီရိမုန်တိုင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပခုက္ကူ ခရိုင် အတွင်းရှိ ရေဘေးသင့် ဒေသများ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်ဒဏ် ခံရသည့် ဒေသများကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို တပ်မတော် (လေ)မှ လေယာဉ်/ ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် (၆၅)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် နေ့သို့ပင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ (၆၅) နှစ်မြောက် တပ်မတော်(လေ) နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဥင်္ီးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပထမ ဦးစွာ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းက နိုင်ငံတော် အလံကို ချိတ်ဆွဲ ပျံသန်းပြီး တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် နှစ်စင်းက ခြံရံ ပျံသန်း၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ်အား အလေးပြု ပျံသန်း ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ် သုံးစင်းက တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) အလံများကို အသီးသီး ချိတ်ဆွဲပြီး အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းကို သယ်သူ ပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်နှင့် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းတို့က လိုက်ပါ ပျံသန်းသည့် Composite Formation ခေါ် အမျိုးအစား မတူညီသည့် ရဟတ်ယာဉ် ၆ စင်းက Double Arrow ခေါ် မြားခေါင်း နှစ်ထပ်ပုံစံ ပျံသန်းခြင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ် တစ်စင်းကို ဂျက်တိုက်လေယာဉ် နှစ်စင်းက ခြံရံလိုက်ပါ ပျံသန်းခြင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်ကြီး တစ်စင်းကို ဂျက်တိုက်လေယာဉ် နှစ်စင်းက ခြံရံ လိုက်ပါ ပျံသန်းခြင်း၊ လေယာဉ်တစ်စင်း၊ ကြားဖြတ်တိုက် လေယာဉ် နှစ်စင်းနှင့် ဘက်စုံသုံး ဂျက်တိုက်လေယာဉ် နှစ်စင်းတို့က Composite Formation ခေါ် အမျိုးအစား မတူညီသော လေယာဉ်များ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းခြင်း၊ ဘက်စုံသုံး ဂျက်တိုက်လေယာဉ် ခြောက်စင်းက Shock Wave ခေါ် တြိဂံပုံစံ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းခြင်း၊ Fan Break ယပ်တောင်ပုံစံ ပျံသန်းခြင်း များဖြင့် ပျံသန်း သရုပ်ပြ ခဲ့သည်။
မြန်မာ့ တပ်မတော် လေတပ်သည် Burma Air Force အဖြစ် စတင် ဖွဲ့စည်းစ အချိန်က Tiger Month လေယာဉ်နှင့် အောစကာ လေယာဉ်များသာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခု (၆၅)ကြိမ်မြောက် အခါသမယတွင် အသံထက် မြန်သည့် စတုတ္ထ မျိုးဆက် ဂျက်တိုက် လေယာဉ်များ၊ အလတ်စား သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်များ၊ ခေတ်မီ တိုက်လေယာဉ် များနှင့် အထွေထွေသုံး ရဟတ်ယာဉ်များ ပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုပြီး မြန်မာ့ ဝေဟင် ပိုင်နက် အတွင်းမှ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး၊ လေကြောင်း ရွှေ့ပြောင်းရေး၊ တိုင်းကျိုးပြည်ပြု၊ ပြည်သူ့ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကို ကြိုးပမ်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကာ တောင်ပံ အဟုန်ဖြင့် ဦးတည် ချီတက်လျက် ရှိပါကြောင်း ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 11:55 AM